“युद्ध मन पराउने अमेरिका”ले युद्धको कारण खोजबिन गर्नुपर्ने-CRI
“युद्ध मन पराउने अमेरिका”ले युद्धको कारण खोजबिन गर्नुपर्ने
स्थानीय समय सेप्टेम्बर १२ तारिखदेखि १४ तारिखसम्म अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता लिने मामिलाबारे लगातार दुई दिनसम्म सुनुवाइ बैठकमा भाग लिनुभयो। अमेरिकी सञ्चार-माध्यमले केही दिनअघि अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता लिएको कुराबारे ब्लिन्केनले जिम्मा लिनुपर्ने कुरा बताए।
२४० वर्षको इतिहास रहेको मुलुकको रुपमा अमेरिकाले चलाएको र संलग्न भएको युद्धको संख्या २०० पटक पुग्यो। सन् १९४५ दोस्रो विश्व युद्ध सम्पन्न भएदेखि सन् २००१सम्म विश्वका १५३ वटा क्षेत्रमा भएको २४८ पटकको सशस्त्र भिडन्तमध्ये अमेरिकाले २०१ पटक चलाएको थियो। अमेरिका विश्वमा युद्ध चलाउन मन पराउने मुलुक हो। अमेरिकाको एकाधिकारको संरक्षण गर्न अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले सैनिक उपायमार्फत अरु मुलुकको आन्तरिक मामिलाको हस्तक्षेप गरेका थिए।
अर्कातिर, अमेरिकाले युद्ध चलाउन मन पराउने कारण अर्थतन्त्रले हो। विगत बीस वर्षमा अमेरिकाले “आतंकवादको प्रतिरोध”को नाउँमा युद्धलाई विश्वभरि फैलाएको छ। अमेरिकी सैन्य उद्योग-व्यवसायले यसबाट धेरै फाइदा प्राप्त गरेका थिए।
तथ्यांकअनुसार, सन् २०२०मा अमेरिकी सैन्य खर्च ७ खर्ब ७८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो भने यसले विश्वको सैन्य कुल खर्बको ३९ प्रतिशत ओगटेको थियो।
अमेरिकाले युद्धमार्फत विश्वलाई हानी पुर्‍याएको छ त? सुनुवाइ बैठकमा ब्लिन्केनले कसरी जवाफ दिने छन् त? विश्वमा “युद्ध मन पराउने अमेरिका”लाई युद्धको उत्पत्ति सर्वेक्षण गर्ने समय पुग्यो।